स्वास्थ्य/याैन – London Nepal News
यी तीन भाइ–बहिनीको वजन मिलाएर करिव ९०७ किलोग्राम छ। अर्थात एउटा मिनी ट्रक बराबर। यो भयानक मोटोपनाको कारण हो एउटा सानो गल्ती। जुन गल्ती हामी दैनिक जसो गर्छौं। भोक मेटाउनु अत्याधिक खाना खाएका कारण यस्तो भएको बताइन्छ। खाना खाने पनि यो कस्तो लत हो जसका कारण शरीरको वजन नै एउटा कार भन्दा धेरै होस्। अझ रमाइलो त के भने यसरी धेरै खाना खाइयको भने आफूको निधन चाँडै हुन्छ भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा छ। तै पनि खानामाथि उनीहरुले नियन्त्रण गर्दैनन्। यो भयानक मोटोपनाका कारण ४९ वर्षीया चिटोका, ३० वर्षीया नाओमी र ४३ वर्षीय ड्रु स्टुअर्ट तीन वर्षदेखि घर बाहिर निस्किएका...
खानपानमा ध्यान नदिदा तथा सामान्य रोगको समयमै उपचार नगर्दा ठूलो रोगको शिकार भइन सक्छ। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न खानपिन तथा शारिरीक कसरतमा समेत ध्यान दिनु पर्दछ। पछिल्लो समय महिला वा पुरुषमा मृगौला क्यान्सरको समस्या बढ्दै गएको छ। मृगौला क्यान्सरका कारण धेरैले आफ्नो ध्यान समेत गुमाउनु परेको छ। ज्यानै लिने यस्तो खतरनाक रोगको सुरुवाती संकेतबाट आज हामीले जानकारी दिदै छौँ : यूरिनमा ब्लड देखिनु यूरिनमा ब्लड देखिनु मृगौला क्यानसरको सुरुवाती चरण हो। यस्तो समस्या देखिनासाथ तपाईले समयमै उपचार गराउनुका साथै खानपिनमा समेत ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। कड्नी क्यान्सर एसोशिएशनका अनुसार जुन व्यक्तिमा यस्तो समस्या देखिन्छ। ती मध्ये ४० देखि...
बेलायतमा गरिएको एक सर्भेक्षणका अनुसार १६ देखि २४ बर्ष उमेर समूहका झण्डै ५० प्रतिशत युवाले पहिलो पटक सेक्स गर्दा कण्डम प्रयोग गर्दैनन् । किन गर्दैनन ? यसको कारण भने यस्तो छ, धेरै जसोले कण्डमले यौनको स्वादलाई फिक्का गरिदिने अर्थात कण्डमले यौन आनन्दमा कमि ल्याउने बताएका छन् । कतिपयले कण्डम प्रयोग नगर्नुको पछाडी रक्सीलाई कारक ठहरयाएका छन् । मदिरामा मात्तिएका बेला होस हुँदैन् लापरबाह पुर्वक सेक्स हुन्छ । कतिपयले भने पार्टनरले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनका अन्य साधानहरु जस्तै पिल्स तथा इम्प्लान्टको समेत प्रयोग समेत कारक भएको बताएका छन् ।बेलायतको स्वास्थ्य विभागले गरेको सर्भेक्षणमा ठूलो युवा समूह कण्डमको प्रयोगबाट बाहिरै रहेको...
कसरी छाड्ने धुम्रपान ? धुम्रपान तथा सूर्ती सेवन छाड्ने दिनमा गर्नुपर्ने १० कुरा
२७ बैशाख २०७५, बिहीबार १६:०९
बाबुराम भुषाल, काठमाडौं- धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि धरै मानिसले यसको लत छाड्न सक्दैनन्। धूमपान त्याग गरेमा हृदयाघात, रक्तनलीसम्बन्धी समस्या, क्यान्सर तथा मष्तिष्काघातबाट मृत्यु हुने जोखिम कम हुन्छ । धूमपान छाड्न चिकित्सकसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा साथी तथा सहकर्मीबाट सहायता या प्रोत्साहन लिन सकिन्छ । धूमपान सेवन त्याग गरेपछि हुने तनावबाट कसरी मूक्त हुने भन्नेबारे औषधि तथा अन्य साधनाका बारेमा पनि चिकित्सकबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। धूमपान छाड्नुभन्दा पहिले पहिले छाड्ने संकल्प गर्नुहोस् । धूमपान पछि सिकेको बानी हो, जसलाई तपाईंले भुल्न सक्नुपर्छ । धूमपान सेवन गर्न त्यति सहज छैन, तर त्यसप्रति गम्भीर हुनसक्नुपर्छ। त्याग गर्न तयार हुनुहोस्...
डरलाग्दो छ विदेशमा नेपाली श्रमिकको मृत्युदर, यी हुन् मृत्युका कारण
२७ बैशाख २०७५, बिहीबार १६:०२
काठमाडौं- सप्तरीका ४४ वर्षीय दशनराम मोची रोजगारीको सिलसिलामा दुबई गएको चार महिना नबित्दै परिवारले उनी लडेर घाइते भएको खबर पायो । घाइते भएको २४ घण्टामै उनको दुःखद निधन भयो। आफू काम गर्दै आएको निर्माण कम्पनीको भवनबाट लडेर घाइते भएका मोची गत असोज ३१ गते पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए। गत माघ २२ गते घाइते भएपछि उपचारार्थ उनी दुबईकै अस्पतालमा भर्ना भए। चिकित्सकले उनलाई बचाउन सकेनन्। माघ २३ गते बिहान निधन भएका मोचीको शव नेपाल ल्याउन भने भण्डै तीन महिना लाग्यो । उनको शव गत चैत ४ गते मात्रै नेपाल ल्याउन सकियो। क्षतिपूर्तिका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा भेटिएकी उनकी...
५ बैशाख २०७५, बुधबार ०८:०८
टम्पा- आँखा सुख्खा हुने समस्या भएकाहरुलाई माछाको तेल लाभदायक हुने मान्यता गलत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । लामो समयदेखि स्थापित मान्यतालाई गत शुक्रबार सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गरेको हो । माछाको तेलबाट बनाइने ओमेगा–३ नामक औषधीवद्र्धक पदार्थ आखाँका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विभिन्न परिक्षणहरूबाट पुष्टि भएको अध्ययनकर्ताहरूले बताएका छन् । झण्डै ५३५ जनामा गरिएको परिक्षणको नतिजाका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन न्यु इङ्ग्ल्याण्ड जर्नल या मेडिसिनमा प्रकाशित भएको छ । अमेरिकाका झण्डै एक करोड साढी लाख मानिसमा आँखा सुख्खा भएर आँखाको दृष्टिमा कमी आउने लगायतका समस्याहरू देखिने गरेको छ । विज्ञहरूले अनुमान गरेअनुसार अमेरिकामा...
पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट कसरी बच्ने ?
९ माघ २०७४, मंगलवार १६:१५
डा गणेश दंगाल पाठेघरको क्यान्सरअन्तर्गत पाठेघरको मुखको क्यान्सर तथा पाठेघरको भित्रपट्टिको क्यान्सर प्रमुख हुन् । ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको छ। धेरै पुरुषसँग यौन सम्पर्क राख्ने, सानो उमेरमा धेरै सन्तान जन्माउने महिलामा पनि यो क्यान्सर हुन सक्छ । महिलामा हुने सम्पूर्ण क्यान्सरमध्ये स्तनको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर र तल्लो आन्द्राको क्यान्सर पछि पाठेघरको क्यान्सर चौथो नम्बरमा पर्छ । जब पाठेघरमा असामान्य कोषहरू अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि हुन्छन्, तब पाठेघरको क्यान्सर हुन्छ। डिम्बासयको क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर पछि पाठेघरको भित्रपट्टिको क्यान्सर नै प्रजनन प्रणालीको क्यान्सरबाट हुने मृत्युको कारक तत्त्व हुन् । पाठेघरको भित्रपट्टिको क्यान्सरबाहेक योनीको क्यान्सर, योनीद्वारको क्यान्सर,...
२० पुष २०७४, बिहीबार १२:०८
गर्भनिरोधका लागि पुरुषले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन कण्डमको आविष्कार कहिले भएको होला ? यो चासो धेरैको हुनसक्छ । इतिहास खोतल्ने हो भने सबैभन्दा पहिले फ्रान्सको एक गुफामा कण्डम आकारको चित्र फेला परेको थियो । उक्त चित्र १५ हजार वर्ष पूरानो भएको बताइन्छ । विश्वको सबैभन्दा पूरानो कण्डम भने स्वीडेनमा फेला परेको छ । अहिले कण्डम सजिलैसँग किन्न पाइन्छ । तर सन् १९२८ पछि अमेरिकामा डाक्टरको सिफारिसपछि भेन्डि मेसिनबाट निकाल्न सकिने भयो । त्यस्तै सोची ओलम्पिकमा खेलाडीहरुका लागि ओलम्पिक भिलेजमा १ लाख कण्डम पुर्याइएकाे थियो । १६ औँ सताब्दीमा भिरिंगी रोगबाट बच्नका लागि कण्डोमको आविष्कार भएको थियो । त्यस समयमा...
ग्यास्टिक तथा अल्सरको अचुक औषधी हो डल्ले खुर्सानी
१४ कार्तिक २०७४, मंगलवार ११:१०
खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन खुसार्नीको प्रयोग गर्छाैं । त्यसमा नि डल्ले अर्थात अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ । डल्ले खुर्सानीको नियमित प्रयोगले ग्यास्टिक तथा अल्सर जसता रोगको औषधी समेत हुन्छ । डल्ले खुर्सानीमा पाईने क्याप्सिसिनका कारण रोगीलाई फाईदा पुर्याउछ । याे खुर्सानीकाे नियमित सेवनले राेगहरू निकाे हुन्छ ।त्यसबाहेक डल्ले खुर्सानीको अन्य फाइदाहरु पनि छन् ।मोटोपन घटाउछ । रगतमा चिनीको मात्रा घटाउछ । पिसावको विरामी लाई लाभदायक छ । हाडजोर्नी लगाएतका दुखाइ घटाउछ । विशेष गरेर अकवरे खुसार्नी हालेर बनाईएको परिकारमा किटाणुको संक्रमण कम हुन्छ । थकाइ मेटाउछ ।
१० कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०९:३१
खानेकुरा काँचो मीठो हुँदैन । तर, यसको लाभ भने छ । त्यसैले आजभोली दिनहुँ काँचो खानेकुरा लोकप्रिय भएको पाइन्छ । जाडो सयमा त्यति काँचोकचिलो नखाए पनि गर्मी मौसम भने यस्तो खानेकुराका लागि उपर्युक्त समय मानिन्छ । गर्मी मौसममा फलफुल र सागसब्जी पनि पर्यापत पाइन्छन् । काँचो खानेकुरा खाँदा राम्रो तर खानुअघि राम्ररी पखाल्ने वा प्रशोधनका अन्य उपाय अवलम्बन भने गर्नुपर्छ । क्यान्सर घटाउँछ दैनिक भोजनमा फलफुल र सागसब्जी जस्ता धेरै भन्दा धेरै काँचो खानेकुरा मिसाएर खाने बानीले क्यान्सरको खतराबाट जोगाउँछ । काँचो खानेकुरामा प्रशस्त भिटामिन, खनिज, एन्टिअक्सिडियन्ट र पकाइएका खानाको तुलनमा बढी हुन्छ । किनकि पकाएको खानेकुरामा कार्सिनोजेन...